Chiziviso chitsva cheApple Watch Series 2 chakanangana nekushomeka kwemvura | Ndinobva mac
New Apple Watch Series 2 kushambadzira kwakanangana nekushomeka kwemvura
Mumavhiki apfuura takakuratidza zviziviso zvichangoburwa izvo vakomana veCupertino vakasimudzira kusimudzira mabhenefiti eApple Watch Series 2, modhi inosanganisa GPS uye kudzivirirwa kwemvura sezvinhu zvikuru zvitsva zvichienzaniswa neyekutanga Apple Watch uye iyo Series modhi. 1. Apple yakatumira vhidhiyo nyowani pane yayo YouTube chiteshi kwatinogona tarisa kuti Apple Watch Series 2 haina mvura sei. Zvine musoro uye kuti vasabatise minwe yavo, vakomana vanobva kuCupertino vanongotiratidza mashandisiro anoita mushandisi neichi chishandiso, anozvikanda mudziva uye anotarisira kufona kwaanogamuchira panguva iyoyo.
Ichi chiziviso chitsva chinonzi Go Swim, chinotiratidza zvakare kuti mushandisi anogamuchira sei chipo, chipo, Apple Watch Series 2, iyo mushandisi anokurumidza kukwira uye kusvetukira mumvura kuti aone mashandiro ayo mumvura. Munguva yekuzivisa, tinogona kuteerera kurwiyo "Evil Twin" naKrrum, kune vese vashandisi vakarohwa naro. Pane ino chiitiko, iyo Apple Watch modhi yakashandiswa ndeyesimbi iyo inosiyana neyealuminiamu modhi nemhando yebhokisi, iyo sezvatinoona iri mativi uye isina makona kuita sevamwe kushambadzira kweChikamu 2 cheApple Watch.
Zviziviso zvemavhiki apfuura dzinoitirwa kukwezva vese vashandisi avo vasati vanyatso kujeka Kana iyo Apple Watch inogona kuve iri zano rakanaka rekupa iyi Kisimusi, chimwe chinhu chinowanzoitika nguva dzese dzezororo padzinosvika. Parizvino uye sezvo Apple Watch iri kutengeswa, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani haina kupa zvirevo zvepamutemo pakutengesa kwechigadzirwa ichi, kunyange hazvo nhoroondo dzichangoburwa, kubva kune zvisiri pamutemo zvinyorwa, zvichisimbisa kuti kutengesa kweApple Watch kwakatangira zvakanyanya kubva gore rapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » New Apple Watch Series 2 kushambadzira kwakanangana nekushomeka kwemvura
Rarama Desktop Pro, chimwe chikumbiro chine mifananidzo yemifananidzo yeMac